ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - မင်္ဂလာပါအထူးနှုန်းများ - Ningbo Hipromos International Trading Co. , Ltd
မြှင့်တင်ရေး Caps & ဦး ထုပ်
အရောင်းမြှင့် Flip Flops
အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၀ တ်စုံ
Promotional Cooler အိတ်များ
အရောင်းအ ၀ ယ်အိတ်များနှင့်အိတ်များ
အရောင်းအ ၀ ယ်အားကစားအိတ်များ
မြှင့်တင်ရေးဝိုင်အိတ်များ & သယ်ဆောင်
မြှင့်တင်ရေးပါဝါဘဏ်များ & Chargers
မြှင့်တင်ရေး USB ချောင်း
မြှင့်တင်ရေးကျန်းမာရေး & ပုဂ္ဂိုလ်ရေး
မြှင့်တင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း & ကြံ့ခိုင်ရေး
မြှင့်တင်ရေးအပန်းဖြေ & အပြင်ဘက်
မြှင့်တင်ရေး Camping & ပျော်ပွဲစား
မြှင့်တင်ရေး Inflatable ပစ္စည်းများ
မြှင့်တင်ရေး Ponchos & မိုးကာအင်္ကျီ
အရောင်းအ ၀ ယ်နေကာမျက်မှန်နှင့်အသုံးအဆောင်များ
အရောင်းအ ၀ ယ်ရုံးနှင့်စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ
မြှင့်တင်ရေးတွင်လည်း & Folders ကို
Promotional Tradeshow ပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်လျှင်ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်း ၀ ယ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားသောဖောက်သည်များအားသူတို့၏ဒေသတွင်းပေးသွင်းသူများအပြင်ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သီးခြားရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်သင်ကြိုးပမ်းနေသည်။ သင့်အတွက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်အားသင်၌ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသိရန်စမ်းသပ်သည်။
Hi Promos ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် bespoke မြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများ နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုန်သွယ် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နင်းဘိုင်မြို့တွင်ထိရောက်စွာရှာဖွေခြင်း၊ အမိန့်များကိုအခမဲ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စျေးသိပ်မကြီးသောရေကြောင်းအဆိုပြုလွှာများဖြင့်သင်၏ထိပ်တန်းလက်တွဲဖော်ဖြစ်လာသည်။ ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ချင်းစီအားကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတာ ၀ န်နှင့်အပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုရှိစေရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောအသင်းဖော်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးမှု ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်သင် ၀ မ်းသာရမည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများသည်စီးပွားရေး၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များကိုရေရှည်စာသားနှင့်ပုံရိပ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကျွမ်းကျင်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်မျက်စိကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုထူးချွန်သောပစ္စည်းများနှင့်စျေးပေါ။ သာမန်ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ရန်ကူညီသည်။ မြှင့်တင်ရေးအိတ်များ, ဦး ထုပ်, အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ, ပြင်ပနှင့်ခရီးသွားထုတ်ကုန်များ, အိမ်သူအိမ်သားလှူဒါန်းငွေများ, အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်တူသောပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သင့်ပြီးအရည်အသွေးရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူအပြည့်အဝတာ ၀ န်ယူမှုရှိစေရန်တရုတ်နိုင်ငံရှိသင်၏သီးသန့်မိတ်ဖက်နှင့်ရုံးခန်းဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ရုံး အချိန်ပြည့်အထူးကုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ သင့်ရဲ့ရုံးခန်း!
ငွေပေးချေမှု လစဉ်သို့မဟုတ်သိုက်အဖြစ်ညှိနှိုင်း။ ငွေလုံခြုံစိတ်ချစွာသိမ်းထားပါ။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု: 3rd ပါတီစစ်ဆေးသူကိုစစ်ဆေးရန်လုပ်ရသည်။ ပထမ ဦး စွာအရည်အသွေး!
ရှာဖွေခြင်း - စက်ရုံတိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းအာမခံချက်။ အကုန်အကျသက်သာသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ကွဲပြားခြားနားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ပင်လယ်ပြင်၊ လေကြောင်း၊ ရထားလမ်းဖြင့်သို့မဟုတ်အမြန်သွားသင်္ဘောများ (DHL, Fedex) ဖြင့်အချိန်မရွေးသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
မင်းတို့ငါတို့အတွက်အရမ်းအရေးကြီးတယ် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့ကိုပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းသည်။ သင်၏အောင်မြင်သောနှင့်ရေရှည်မိတ်ဖက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်အမှာစာများပါ ၀ င်သော်လည်းကိစ္စရပ်တိုင်းကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများကိုအကောင်းဆုံးပေးမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ချရသော & တည်ငြိမ်သော: ငါတို့မြင်၊ ကြား၊ ထိတွေ့၊
ကျွမ်းကျင်: ကမ်းလှမ်းမှုများသည် ၂၄ နာရီအတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အခုပြောကြရအောင် သင်၏ပထမဆုံးစိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်များနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးရွေးချယ် - Hi Promos ။ အကူအညီတောင်းခံရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ပို့ပါ။
Rm1705၊ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ Shangdong စီးပွားရေးစင်တာ၊ အမှတ် ၂၀၊ လမ်းမတော် ၁၉၁၈၊ ကန်ဟိုင်းလမ်း၊ Yinzhou ခရိုင်၊ Ningbo 315041, China
ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ, မှပံ့ပိုးသည် LiveChat